Indlela yokuba ngutata olungileyo: iingcebiso kunye nemiba | Amadoda aQinisekileyo
IsiJamani sasePortillo | | isiko
Akukho mntu wathi ngutata wayelula. Kukho iimpawu ezinjengothando, intlonipho kunye nokuzingisa, ezizezona ziphambili ekukhuliseni ubudlelwane obuhle nabantwana. Ndiyabulela kwezi mpawu kunokuba ngumhla abantwana abancinci kufuneka bonwabele ngokupheleleyo ubomi kwaye bafunde ukuba baya kuba badala nini. Maninzi amadoda angaziyo Indlela yokuba ngutata olungileyo. Kungenxa yokuba abakholelwa ukuba unegunya elaneleyo okanye abafumani nto ayifunayo ngonyana wakhe.
Ke ngoko, kweli nqaku siza kukuxelela iingcebiso zokufunda ukuba ngutata olungileyo.
1 Indlela yokuba ngutata olungileyo
2 Kufuneka wenze ntoni ukuze ube ngumzali olungileyo
Akukho mntu uyazi ukuba ngutata olungileyo. Zininzi iindlela zokujika kobomi kwaye umntu ngamnye unokuzitolika ngenye indlela. Iindlela ezahlukeneyo zokuba ngumzali zinokunikwa ngokuxhomekeke kwizinto ezininzi. Ukuba Uyise ucwangciselwe enye okanye ukuba inzala ligazi okanye yamkelwe. Zininzi izinto ezinokuthi zibeke imeko yokuba ngumzali ngenye indlela. Ngaphaya kwale miqathango siyikhankanyileyo, ukuba ngumzali kudlala indima ebaluleke kakhulu ekukhuliseni umntwana. Enkosi ngokuba ngumzali olungileyo, abantwana banako ukukhula kakuhle.
Ukwazi ukuba ngutata olungileyo, into yokuqala kukwazi ukuba ngumama yintoni. Ibanjwa ayikho enye into ngaphandle kokuba ngutata. Yenye yeemeko eziphakathi kwempawu yesazisi sendoda. Kuxhomekeka kwiinkcubeko ezithile nakwindima yesini, utata unxulunyaniswa nonyana wakhe ngokuthe ngqo. Kuya kufuneka uphumeze imisebenzi ethile ukuze uhlangabezane neemfuno zomntwana wakho, kwaye nangona kusoloko kusithiwa oomama babaluleke kakhulu, ootata basisitshixo esisiseko kusapho.
Ngokwezinye izifundo, ukuba ngumzali kubandakanya ubudlelwane obuninzi kunye neendawo zokuba ngumzali. Obu budlelwane buza kunceda ukuba inkampani iphuhle ngokupheleleyo. Siza kubona ezinye zezinto ekufuneka zenziwe kwindlela yokufunda ukuba ngutata olungileyo:
Ukuqhuba usiya kwelicala: Yenzelwe ukukhokela unyana wethu kwicala elifanelekileyo ukuze afunde amaxabiso kwaye aphile eluntwini
Uthando, inkathalo kunye nemfundo: Ukuseka ubudlelwane apho uthando lukhona kwaye unyana wenqanawa uyakhathalelwa Ukuseka imfundo yinto entsonkothileyo. Ukufundisa, umntu kufuneka aqine kwaye utata kufuneka abe ligunya kunyana.
Ukufunda ngokufanayoXa kuziwa ekufundiseni umntwana wethu, ayisiyi kuba nguye kuphela, kodwa nathi sifunde iindlela ezithile zokuziphatha.
Dlala kwaye wonwabe: ayibubo bonke ubomi obusekwe kuqeqesho, kodwa kufuneka ithulule njengomhlobo wokudlala kunye nokonwaba
Ukwenziwa kwesazisi: Ngexesha lokufundisa unyana kufuneka enze isazisi.
Izakhono kunye nobuchule kwezentlalo: ukwenza umntwana kudala izakhono kunye nobuchule obuthile eluntwini
Iimpawu kunye neenkolelo: soloko kusithiwa unyana ngulowo wezinto zikayise. Amaxabiso ama-mushroom esijonga kuwo inzala abalulekile kwikamva. Kukwanjalo nangeenkolelo.
Kufuneka wenze ntoni ukuze ube ngumzali olungileyo
Njengokuba sithetha ngayo yonke le nto, kukho amawakawaka ezindlela onokwakha kunye nokukhulisa ubudlelwane bakho nomntwana wakho. Eyona nto ifanelekileyo kukubeka izimvo usemncinci kakhulu kwaye sikuxelele ngokuzala konke. Okokuqala kukuveza uthando. Amakhwenkwe ahlala efuna uthando nothando lwabazali. Oku kubaluleke kakhulu kuba kukho iimeko zolutsha kunye nabantu abadala abaneengxaki ebomini babo kuba bebengenalo uthando lwabazali ukususela ebuntwaneni.
Abantwana bafuna ukuviwa kwaye bazive bethandwa. Kubantwana uyakuba njengenqaba ebakhuselayo kubunzima obuboniswe bubomi. Kulungile ukubonisa uthando kubantwana abancinci ngokuchitha nje ixesha nabo nokwenza naluphi na uhlobo lomsebenzi. Akukho nto ithelekiswa nokumamela abo ubathandayo kunye nothando ngelizwi lakho. Ayipheleli ekuhambeni kwexesha elininzi, kodwa lixesha elisemgangathweni. Akufanelekanga ngokuvalwa kwakho ngaphandle kokunxibelelana ngokuqhubekayo. Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya, kufuneka sikhumbule xa sasisebancinci. Ixesha esilichithe notata wethu, nokuba liyadlala, sincokola, senza nantoni na, ngokuqinisekileyo kufuneka siyenzele unyana wethu.
Kubantwana, wonke umzuzu ochithwe nabazali uyaphindeka kuba banamava amatsha kwaye bawuthathe njengexesha elibalulekileyo. Ke ngoko, kungcono ukucwangcisa kwaye usebenzise wonke umzuzu ukuze ukwazi ukuchitha nabantwana bakho. Ukwengeza, Kubalulekile ukuba ubandakanyeke kwimisebenzi ukuze ube nokubazi kwaye ubancede.
Abazali abazi yonke into. Kubalulekile. Bobabini utata nomama kufuneka baziswe ngemiba yokukhulisa abantwana. Enkosi kwitekhnoloji yangoku, sinokufumana ulwazi oluninzi ngeendlela ezininzi ezinokusinceda kule nxalenye yobomi. Kubalulekile ukugxeka ngokubhekisele kwinto esiyibonileyo kuba kukho ulwazi oluninzi olunokuba bubuxoki.
Enye yezinto ezibalulekileyo ekufundeni ukuba ngumzali olungileyo kukuthumela uqeqesho kunye nothando. Ukuba ubudlelwane obusondeleyo kunye nonyana wakho buvela kuDon Punto, injongo yoqeqesho inokulahleka. Kukho iingcebiso, ukulungiswa nkqu Isohlwayo esinokunikwa ukuze umntwana enze kakuhle ebomini kwaye angabudinwa ubomi bakho okanye ukudana. Ke ngoko, uqeqesho kufuneka lufundiswe ngothando.
Ungaze ulahlekelwe yingqondo yakho ukuba sisikhokelo somntwana wakho. Ukuba uphumile kwiibhokisi zakho, kungcono ukuba ulinde ixesha ukuzola ukusukela ngoko unokuzisola ngezinye izinto. Kufuneka sazi ukuba abantwana, nangona bekhula kwaye bekhula, abangobantu badala.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufumana izibonelelo zokufunda ukuba ngumzali olungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » isiko » Indlela yokuba ngutata olungileyo